မူလစာမျက်နှာ .......အဆုံးမဲ့လွမ်းချင်း ......ဓါတ်ပုံ ......Vdieoသီချင်း ......photo gallery
အဆုံးမဲ့လွမ်းချင်းမှ ကြိုဆိုပါ၏ ................... မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ
နိုင်ငံတကာ မြန်မာ့ သတင်းစာမျက်နှာများ
မြန်မာ့ သတင်း blogger များ
+/- ဘလော့ဂ်ကာ ကိုကို တွေပေါ့
+/-ဘလော့ဂ်ကာ မမ တွေပါ
နံနက်အာရုံဦးတွန်သံနှင့်အတူ နေခြည်နုလေးတွေက ဟိုမှ ဒီမှ တိုးဝင်လာခဲ့ကြတယ်။
အော် နံနက်မိုးသောက်ခဲ့ပြန်ပြီပေါ့..ဒီလို ရေတွက် ခဲ့တဲ့ မနက်ခင်းလေးတွေက ငါ့အခန်းထဲမှာ ပြန့်ကျဲလို့။
အာရုံကိုစုစည်းလို့ ပြူတင်းပေါက်ကို တွန်းအဖွင့် လေပြေအေးလေးတွေက အလုအယက်နဲ့တိုးထိုး ကျီဆယ်ကာ
ငါကို နှစ်သိမ့်မှု့တွေ ပေးနေသယောင် နဲ့ ...
ဟိုးအဝေမှာ ရင့်ကျက်လှတဲ့တောင်တန်းတွေက အသူရာနေမင်းကို ခေါင်းပေါ်မှာ ရွက်ကာ လောကသစ်တစ်ခုအတွက် အားအင်တွေက အပြည့်။
ရော့ရဲ ချိနဲ့ နေတဲ့ ငါ့အတွက် အားအင်တွေ ဖြည့်ဆည်းပေးနေသလို။
ဟိုး သစ်ပင်ပေါ်က ငှက်မောင်နှံ ကတောင် ငါ့ကို လှောင်ပြုံးလို့ အသံလေးတွေပေးနေပြီး
သူ့ချစ်သူနဲ့ အတူ လှပတဲ့ အနက်ခင်းမှာ ချစ်ခွန်းတွေ ဖွဲ့သီလို
အရာအားလုံးက ငါကို သနားဂရုဏာ အပြည့်နဲ့ အားပေးနေခဲ့ကြတယ်။
ဒါပေမယ့် မင်းကိုလွမ်းတဲ့ စိတ်တွေက ဘာနဲ့မှ အစားထိုးလို့ မရခဲ့ဘူး။
မင်းတွက် ရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးတွေကလည်း ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စ နဲ့ ကြေမွလို့
မှောင်မိုက်နေတဲ့ ငါ့အခန်းထဲမှာ တိတ်ဆိတ်ခဲ့တဲ့ တီတီတာတာအသံလေးတွေ ကပဲ့တင်ထပ်နေခဲ့တယ်
ချစ်သူရယ် နံရံတွေသာ နားရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် မင်းကို ပြန်ပြောကြပါလိမ့်မယ်
မင်းကို လွမ်းနေပြီ ဆိုတာ...
မင်းကို ချစ်ခဲ့ ဒီစိတ်လေးနဲ့ ရှင်သန်နေဆဲနေ့ရက်တွေ
ဘယ်ခါ ပျက်စီးမသွားပါ ငါမင်းအတွက်ရှိနေမှာ
မင်းသာငါရဲ့ လိုအပ်ဆုံးပါ ကျန်တာတွေလည်း ဂရုမစိုက်ဘူးကွာ
မင်းကိုပဲ ကမ္ဘာကြီးဆုံးတိုင်လက်တွဲမယ် အချစ်လေးရယ်
မင်းယုံလိုက် ငါချစ်သမျှတွေ ပုံပေးမယ် ချစ်လေးရယ်
ချစ်သူရယ် ဒီနှင်းလေးတွေ မကုန်ဆုံးခင် ပြန်ခဲ့ပါ လွမ်းနေပြီ
ဝေးနေရတဲ့ ချိန်တွေတိုင်းမှာ ရင်မှာကြေကွဲ တမ်းတမိနေတာ
ကိုယ့်ရဲ့ မင်းရဲ့ ကဗျာတွေလည်း လေ ငါမြင်ရောင်တိုင်းလွမ်းလို့ ရူးနေတယ်
မင်းလေး ငါ့နားရှိစဉ် ကမ္ဘာကြီးလည်း ပြည့်စုံတယ်။
စာရေးသူ~~~ မင်းမြတ်ဘုန်း စာရေးချိန် 10:27 AM0ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ်
အပြင်မှာ မိုးတွေ တသဲသဲမဲမဲ ရွာနေတယ်
ပူလောင်လှတဲ့ငါရင်ခွင်ကို အေးချမ်းအောင်တော့ မင်းမတတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး
ဒါပေမယ့် ငါမသိခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေကို တော့ မင်း က တူးဆွနိုင်ခဲ့တယ်
ဒါပေမယ့် ရင်တွင် မြစ်ရေကိုတော့ လျှံကျစေခဲ့တယ်
ကျဆင်းလာတဲ့မျက်ရည်တွေကို မကုန်ခန်းအောင် မင်းမလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး
ဒါပေမယ့် ငါရဲ့အာရုံတွေကိုတော့ တိုက်စားသွားခဲ့တယ်။
ပီပြင်လွန်းလှတဲ့မင်းရဲ့ ပုံရိပ်တွေကိုတော့ မင်းမချေဖျက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး
ဒါပေမယ့် တစ်လောကလုံးကိုတော့ မင်းအနိုင်ယူနေခဲ့တယ်။
စာရေးသူ~~~ မင်းမြတ်ဘုန်း စာရေးချိန် 10:06 PM0ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ်
ဆီးနှင်းမျာ တဖွဲဖွဲကျနေတဲ ဒီဇင်ဘာရဲ့ မနက်ခင်း။
အေးချမ်လှတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး ဖြူဆွတ်လို့ကောင်မလေးရေ
ဘယ်ရောက်နေပြီးလည်းကွာ မင်းရဲ့တိတိတာတာ အသံလေးတွေ
ဒီနေရာဒီဒေသကိုရောက်တိုင်းမင်းကို မေ့လို့မရဘူး ကောင်မလေးရေ၊
ကောင်မလေးနဲ့ အတူတူလျှောက်ဖူးခဲတာပဲ မင်းဟာ ငါ့ရဲ့လက်ကို တွဲ၊
အခစ်ခစ် ရယ်သံလေးနဲ့ ခုန်ပေါက် ပြေးလွှားပြီး ငါကို ဆွဲလို့။
ဒီဇင်ဘာ နှင်းတွေ ကျတဖွဲဖွဲ ကျနေတဲ့ ဒီလမ်းပေါ်မှာလည်း
တို့တတွေ လျှောက်ဖူးခဲ့တယ်နော် ကောင်မလေး။
မင်းအရိပ် မင်းဝိညဉ်တွေ ရှိတဲ့ဒီနေရာလေးကို ကိုယ်မလာချင်ပေမယ့်
တကယ်ဆိုရင် ကောင်မလေးက လောကကြီးကို ကိုယ့်ထက်
ဘာလို့ ကိုယ့်ထက်အစောကြီးပြန်သွား ရတာလဲကောင်မလေးရယ်။
ပြန်တွေ့နိုင်မယ့် ကံတရားကို မချင့်မရဲ့နဲ့
လွမ်းတယ် လို့ တိုးတိုးလေး ရွတ်နေမိတယ်။
ကောင်မလေးရယ် ကိုယ့်နှလုံးသားထဲက လွမ်မောမှုတွေကို
မင်း. ချန်ရစ်ခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာည တွေက အေးစက်စွာနဲ ကုန်ဆုံးခဲ့ပြီကွာ....
စာရေးသူ~~~ မင်းမြတ်ဘုန်း စာရေးချိန် 10:28 PM0ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ်
ပထမအကြိမ်မြောက် စုပေါင်း မဟာဘုံကထိန်ပွဲ အောင်မြင်စွာနှင့် ပြီးစီးခြင်း
ကျွန်တော်တို့၏ ကျေးဇူးတော်ရှင် ညောင်ကန်အေး ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးစီးတည်ထောင်တော်မူသော ညောင်ကန်အေး သာသနာ့ရိပ်သာ (စင်္ကာပူ) တွင် စုပေါင်း မဟာဘုံကထိန်ပွဲတော်ကြီး (ပထမ)အကြိမ်အဖြစ် Nyaung Kan Aye Dharma Society က ဦးစီးကျင်းပ၍ ပုရိမဝါကပ်တော်မူကြကုန်သော သံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့အား မြန်မာ့ရိုးရာ အစဉ်အလာနှင့်အညီ ကထိန်သင်္ကန်း အစရှိသော လှူဖွယ်ပစ္စည်းတို့ကို ဆက်ကပ်လှူဒါန်း ရေစက်ချ အခမ်းအနား အောင်မြင်စွာနှင့် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
ရခဲလှစွာသော လူဘဝတွင် ကြုံခဲလှစွာသော သာသနာတော်ကြီးနှင့် တွေ့ကြုံခိုက် တစ်နှစ်မှ တစ်လ၊ တစ်လမှာ တစ်ရက်၊ တစ်ရက်မှာ တစ်ကျောင်း၊ တစ်ကျောင်းမှာ တစ်ကြိမ်သာ လှူဒါန်းရသော ကုသိုလ်ထူး၊ ကုသိုလ်မြတ် ကထိန်သင်္ကန်း ကပ်လှူပွဲကို အလှူရှင်အပေါင်း၏ ထက်သန်တဲ့သဒ္ဒါတရား ကြောင့် များပြားလိုက်တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေ ထင်ထားတာထက်တောင် များပြားခဲ့တဲ့အတွက် ပင်ပန်းပေမယ့် ဝမ်းသာပိတိဖြစ်မိပါတယ်။ နောင်နှစ်တွေမှာလည်း ဒီထက် ပိုတိုးလို့ လှူဒါန်းနိုင်အောင် ဆုတောင်းမိပါတယ်။ ဒါန အလှူကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ပီတိကတော့ ဘာနဲ့မှ လဲလို့မရအောင် တန်ဖိုးကြီးလှပါတယ်။
ကျွန်တော် နှင့် ကျွန်တော့် မဒီတို့ကတော့ မြန်မာ့အစားအစာတွေ သိပ်အများကြီး မလုပ်နိုင် (လူအင်အားလည်းမလောက်) တဲ့ အတွက် အားလုံးအတွက် လည်း အဆင်ပြေမယ့် သောက်ရေသန့် ပုလင်း နဲ့ အချိုရည်ပဲ လှူဖြစ်တယ်။ ရေဆိုတာကတော့ လူ၊ သတ္တဝါ၊ သက်ရှိ အားလုံးအတွက် မရှိမဖြစ်ပေါ့ဗျာ။ ရေလှူရတဲ့ အကျိုးအားဖြစ် ရေအကျိုး ၁၀ ပါးကတော့ မတောင်းပဲနှင့် ပြည့်တယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်။ တကယ်တော့ အကျိုးကို မျှော်ကိုလို့ လှူတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ လှူရင် သူအလိုလိုပြည့်တယ်လို့ ကြားဖူးတာပဲရှိတာပါ။
လှူလို့ ရရှိလာတဲ့အကျိုးဆိုရင်တော့ ခံစားနိုင်ပါတယ် ။ အကျိုးကို လို၍ လှူမယ်ဆိုရင်တော့မလှူသင့်ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် အလှူဒါန ပြုလုပ်တဲ့ နေရာမှာ လှူတတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ကဲ့ မတောင်းပဲ ပြည့်တဲ့ရေအကျိုးဆယ်ပါးကတော့
၄၊ ခွန်အားဗလ ကြီးမားခြင်း
၅၊ ဥာဏ်ပညာ ကြီးမားခြင်း
၇၊ ရောဂါဘယ ကင်းဝေးခြင်
၉၊ ရေရှားပါးမှုဒဏ်မှ ကင်းဝေးခြင်း
သက်ရှည်၊ဆင်းလှ၊ ချမ်းသာရ၊ ဗလ၊ဥာဏ်ပညာ။
ကြည်လင် သန့်ရှင်း၊ ရောဂါင်း၊ ခပင်း ခြွေရံဖြာ။
ရေမငတ်ငြား၊ လျင်စွာသွား၊ ဆယ်ပါး ရေကျိုးသာ။
အဖေအမေအဖိုးအဖွား တို့အား အမှူး ထား၍ ကထိန်သင်္ကန်း ဆပ်ကပ်လှူဒါန်းခြင်း
စာရေးသူ~~~ မင်းမြတ်ဘုန်း စာရေးချိန် 11:02 PM0ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ်
သန္တုဿီတ အမှူးထား၍
ကြိုဆို ဖူးမျှော် သာဓု ခေါ်စေသော်
စာရေးသူ~~~ မင်းမြတ်ဘုန်း စာရေးချိန် 2:41 AM0ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ်
သီတင်းကျွတ်လပြည့် (အဘိဓမ္မာ အခါတော်နေ့)
ယနေ့ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ ညောင်ကန်အေး သာသနာ့ရိပ်သာ (စင်ကာပူ) ၌ ညောင်ကန်အေး
ဆရာတော် မဟာဓမ္မကထိကဗဟုဇနဟိတဓရ၊ အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ ဘဒ္ဒန္တဣန္ဒက သီတင်းကျွတ်
အထူးတရားပွဲကို နာကြားခဲ့ကြရပါသည်။ ယနေ့ သီတင်းကျွတ်လပြည့် နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆရာတော်ရဲ့
တရားအကျဉ်းချုပ်ကတော့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဘုရားက ဝါတော် ၇ ဝါ အရောက်မှာ မယ်တော်ဖြစ်ခဲ့ဘူးသော
သန္တုဿီတ နတ်သားကို အမှူး ပြု၍ နတ်ဗြဟ္မာအပေါင်းကို ဝါတွင်း ၃ လ တိုင်တိုင် အဘိဓမ္မာတရား
ဟောကြား၍ မိဘကျေးဇူးဆပ်ကြောင်းကို ဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ရှင်သာရိပုတ္တာ ရဟန္တာမြတ်
ကလည်း မိဘကျေးဇူးကို မည်သို့ ဆပ်ခဲ့ပုံတို့ကို ဟောကြား တော်မူခဲ့ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့တတွေ မိဘကျေးဇူးဘယ်လောက်ကြီးကြောင်းကို သိပြီး ဘယ်လိုကျေးဇူးဆပ်ရမယ်
ဆိုတာ သိဖို့လို ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လိုပုထုဇဉ် လူသားတွေအဖို့ မိဘကျေးဇူးကို မဆပ်နိုင်တောင်မှ
မစော်ကား မိဖို့ တော်တော် သတိထားရပါမယ်။ ကာယကံအနေ နဲ့ရော ဝစီကံ အနေနဲ့ရော
မစော်ကားမိအောင် ပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ အများကြီးကံကောင်းကြပါတယ် မြန်မာပြည်လို
ဗုဒ္ဓတရားထွန်းကားတဲ့ တိုင်းပြည်မှာ မွေးဖွားခဲ့ကြတဲ့အတွက် ကျွန်တော် တို့တတွေ
လိမ္မာယဉ်ကျေးလာအောင် သွန်သင် ဆုံးမမည့် ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေကို ငယ်စဉ်ကတည်းက
လူကြီးမိဘတွေ ရဲ့ သွန်သင်ဆုံးမ မူ့တွေကို ကြားနာခဲ့ရပါတယ်။
အဲ့ဒီအတွက် ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်မှ လူငယ်လူရွယ် များဟာဆိုရင်ဖြင့် အနည်း နှင့် အများတော့
လူကြီးမိဘတွေကို ရိုသေရမှန်း လုပ်ကျွေး ပြုစုရမှန်း သိနားလည်ကြတယ်။
စော်ကားဖို့ စိတ်မဖြစ်တော့ဘူး။ ဒါကောင်းတဲ့ အချက်တစ်ခုပဲ။
ခုကျွန်တော် ရောက်နေတဲ့ တိုင်းပြည်သေးသေးလေးမှာ ကတော့ဖြင့် မိဘကျေးဇူးဆို တာ
သိပ်မသိကြဘူးလို့ထင်တယ် ။ ကျေးဇူးသိဖို့နေနေသာသာ ကိုယ့်မိဘတွေ အသက်ကြီးလာပြီး
မလုပ်နိုင်မကိုင်ကြရင်တောင်ဘယ်လို ပြုစုရမယ်ဆိုတာတောင် သိပ်မသိကြတော့ဘူး။
တစ်ခါက ကျွန်တော် ကိစ္စတစ်ခုနှင့် ဆေးရုံတစ်ခုကို ခဏရောက်သွားခဲ့တယ် အဲဒီမှာ
ကျွန်တော်လည်း တုံကင် အလှည့် ကို ထိုင်စောင့်နေတုန်း ဆေးရုံထဲကို အသက် ၇ဝ လောက်
အဖိုးအိုတစ်ယောက်က အဖွားအို တစ်ယောက်ကို လက်တွန်းလှည်းလေးပေါ်မှာ တွန်းရင်း
ဝင်လာခဲ့တယ်။ အဖွားအို က ဆေးပိုက်တန်းလန်းနဲ့လှည်းပေါ်မှာ။ ကျွန်တော်တောင်တွေးမိတယ်
ဒီအဖိုးက ဒီအဖွားကို တော်တော်ချစ်ရှာတာပဲ။ ကိုယ်တိုင် မိန်းမကို ဆေးရုံလာပို့တယ်
ဘယ်သားသမီးမှ မခေါ်ပဲ နဲ့ လို့။ အဖိုးအိုကတော့ တက်ကြွရွှင်လန်းစွာနဲ့ပဲ လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်း
တွေနဲ့ လိုက်လုပ်နေရှာတယ်။ ဒီလိုနဲ့ အဖွားအိုရဲ့ ဆေးစစ်တဲ့ ကိစ္စတွေပြီးလို့ ပိုက်ဆံ ရှင်းတဲ့
အချိန်လောက်ရောက်မှ အသက် ၃၅နှစ် လောက် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရောက်လာတယ်
ပျာပျာ ပျာပျာ နှင့် မျက်နှာကလည်း ကြည့်ကြည့်သာသာ မရှိဘူး။ ရောက်တာနှင့် အဖိုးအို အား
သူကို ဘာလို့ ခေါ်သလဲဆိုတဲ့အကြောင်း။ သူအလုပ်တွေ အရမ်းများနေတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း။
သူ လိုအပ်တဲ့ ငွေကြေးတွေပေးပြီးပြီဆိုတဲ့ အကြောင်း ဆူဆူပူပူ နှင့် ပြောတော့တာပဲ။ အဖိုးအိုလည်း
ပထမ ဘာမှ ပြန်မပြောသေးပါဘူး လူတွေ အများကြီး ဆိုတော့ ။ အဲဒီအမျိုးသမီးကလည်း ပွစိပွစိနှင့်ကို
ဆက်ပြော နေတော့တာပဲ အဖေတို့ က ကိုယ့် ကိစ္စကိုယ်မရှင်းဘူး တစ်ခါလာလည်း သူကိုပဲခေါ်တယ်
ဆိုတဲ့ အကြောင်းပေါ့၊ နောက်ကြာတော့ အဖိုးအိုလည်း ဆက်လက် သည်းညည်း မခံနိုင်တဲ့အဆုံး
သူ့မ အမေ သေမလို ရှင်မလို ဖြစ်နေလို့ ခေါ်လိုက်ရကြောင်း။ငွေကြေး နဲနဲလိုအပ်လို့ ခေါ်လိုက်ရကြောင်း
တစ်ယောက်တစ်ခွန်းစကားတွေများကြပြီး သူ့သမီးဖြစ်သူကို နောက်ဘယ်တော့မှ ငါတို့နဲ လာမတွေ့နဲ့
ငါ့မိန်းမ ကို ငါဆေးကုမယ် ဆိုပြီး မောင်းထုတ်လိုက်တယ် ဘေးနားမှာ ရှိတဲ့ လူတွေလည်း အဖိုးကြီးနှင့်
အဖွားကြီးကို ဂရုဏာသက်စွာနဲ့ ကြည့်နေကြတယ်။ ကျွန်တော်လည်း တွေးမိလိုက်တယ်
ဒီမိန်းမ မိဘကျေးဇူးဆိုတာ နည်နည်းလေးမှ နားမလည်ဘူး။ အိုကြီးအိုမတွေကို ဘယ်လို စောင့်ရှောက်
ရမယ်ဆိုတာနားမလည်ဘူး။ မိဘတွေဆိုတာက သူတို့အသက်အရွယ်ကြီးလို့ မသွားမလာနိုင်တော့ရင်
သူတို့အားကိုးတဲ့သားသမိးတွေကို သူတို့အနားမှာရှိစေချင်ကြတယ် ပြုစုယုယ တာခံချင်ကြတယ်။
ငါ့သားက ငါတို့ကို ဘယ်လို ဂရုစိုက်တာ ငါတို့သမီးက ငါတို့ကို ဘယ်လိုပြုစုတာဆိုပြီး ဂုဏ်ယူချင်ကြတယ်။
ကျွန်တော်လည်းသူတို့ကို ကြည့်ပြီး အဝေးမှာ ရှိနေကြတဲ့ ဖေဖေနဲ့မေမေကို သွားသတိရလိုက်မိတယ်။
ဖေဖေနဲ့မေမေ တို့နေထိုင်မကောင်းဖြစ်ကြတဲ့အခါ ဘယ်သူက ဆေးရုံဆေးခန်းလိုက်ပို့ပေးမလဲ
ဘယ်လိုပြုစုမလဲလို တွေးကြည့်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ ရင်နင့်အောင်လည်းခံစားမိပါတယ်။
ဖေဖေနဲ့ မေမေ တို့ကို အမြန်ဆုံးကိုယ်ထိလက်ရောက်ပြုစုနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
ခုလို သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့မှာ မာတာပိတုဂုဏောအနန္တောဆိုတဲ့အတိုင်း အဝေးမှာ ရှိနေကြသော
ဖေဖေ မေမေ နှင့် ကြီးကြီးတို့ကို သား မင်းမြတ်ဘုန်း ဤနေရာမှ ရိုသေစွာ ရှိခိုးကန်တော့လိုက်ရပါသည်။
ဖေဖေ မေမေ ကြီးကြီးတို့ ကျန်းမာ ချမ်းသာစွာနှင့် တရားဘာဝနာ တွေကို ကျင့်ကြံပွားများနိုင်ပါစေလို့
စာရေးသူ~~~ မင်းမြတ်ဘုန်း စာရေးချိန် 2:26 PM0ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ်
ရုန်းထွက် ခဲ့ပါတော့ ချစ်သူ...
အားအင်တွေ ပြည့်ဝနေမှ ဖြစ်မှာပေါ့
လှပ စုံညီတဲ့ ဒီလောကကြီးကို
စာရေးသူ~~~ မင်းမြတ်ဘုန်း စာရေးချိန် 6:11 PM0ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ်
မသဲမကွဲနဲ့ လွဲခဲ့တဲ့ အရာတွေကို
စာရေးသူ~~~ မင်းမြတ်ဘုန်း စာရေးချိန် 9:20 PM 1 ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ်
နိဗ္ဗာန် ပြည်ကြီး မဝေးတော့ပြီ။
ညစ်မဲရိပ်ကို ဖယ်ကာ အခု
ပစ္စုပ္ပန် ယခု လက်ဝယ်ခုကို
စာရေးသူ~~~ မင်းမြတ်ဘုန်း စာရေးချိန် 10:10 PM0ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ်
ပထမအကြိမ်း စုပေါင်းမဟာဘုံကထိန်ပွဲ ဖိတ်ကြားခြင်း
ကျေးဇူးတော်ရှင် ညောင်ကန်အေး ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးစီးတည်ထောင်တော်မူသော ညောင်ကန်အေး သာသနာ့ရိပ်သာ (စင်္ကာပူ) တွင် စုပေါင်း မဟာဘုံကထိန်ပွဲတော်ကြီး (ပထမ)အကြိမ်အဖြစ် Nyaung Kan Aye Dharma Society က ဦးစီးကျင်းပ၍ ပုရိမဝါကပ်တော်
မူကြကုန်သော သံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့အား မြန်မာ့ရိုးရာ အစဉ်အလာနှင့်အညီ ကထိန်သင်္ကန်း အစရှိသော လှူဖွယ်ပစ္စည်းတို့ကို ဆက်ကပ်လှူဒါန်း ရေစက်ချ အခမ်းအနားသို့ အောက်ပါ အစီစဉ်အတိုင်း ကြွရောက်ကြပါရန် နိဗ္ဗာန်အကျိုးမျှော်၍ နိုးဆော်ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
မြန်မာ ရိုးရာ အစားအသာက်များဖြင့် နံနက် (၉း၃၀) မှ စတင်ကာ ဓမ္မမိတ်ဆွေများအား ဧည့်ခံကျွေးမွေးပါမည်။
Place: Link Hall, Between Blk 212 and Blk 213,
Yishun st 21, Singapore 760209
Date: 11th October 2009 (Sunday)
6:30am: Offering Breakfast Dana to the Venerable Sangha.
10:30am: Offering Kathina Robe to the Venerable Sengha.
11:30am: Offering of Lunch Dana to the Venerable Sangha.
2:00pm: Dhamma Talk by the Most Venerable Nyaung Kan Aye Sayadaw
on the benefits of Kathina Robe offering and sharing of merits.
All of our Buddhist devotees in Singapore are kindly informed and invited to Listen to the Noble Dhamma talk together with us for realization of Nibbana.
Your attendance and participation at this auspicious event will be much appreciated.
Mya the blessing of the Noble Trple Gem be with you and all devotees!
ကထိန် အလှူရှင်များ ရနိုင်သော အကျိုးတရားငါးပါး
၁. တားဆီးကင်းကွာ၊ လွတ်လပ်စွာ၊ လိုရာသွားနိုင်သည်။
၂. တာဝန်ကိစ္စ၊ မလေးရ၊ ပေါ့လှလေတော့သည်။
၃. စားလိုသည်များ၊ စားသော်ငြား၊ ဘေးကာမသင့်ပြီ။
၄. ပစ္စည်းအများ၊ သိမ်းပိုက်ထား၊ ဘေးကာမရှိပြီ။
၅. ကိုယ့်ပစ္စည်းများ၊ သူတစ်ပါး၊ ယူသွားကင်းပသည်။
အောက်ပါလှူဖွယ်ပစ္စည်းများကို ကျောင်းတွင်အလွယ်တကူ ဝယ်ယူလှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။
၁.ပရိက္ခရာရှစ်ပါးအစုံ S$ 50
၂.သင်္ကန်းဒွိစုံ S$ 30
၃.သပိတ်တစ်လုံး S$ 10
၄.ထီးတစ်လက် S$ 5
၅.ဖိနပ်တစ်ရံ S$ 5
Five kinds of benefit of offering kathina robes gained by donors
1. Wherever you go, you will be free from danger.
2. Business can be done easily by the donors.
3. Donors are free from food poisoning wherever dining.
4. Properties are safe from fire, water, dictators, thieves and bad offspring.
5. Donors' wealth and possession could not be taken unruly.
The following requisites are available at the Tample so that you can easily offer them to the Venerable Monks.
1. A set of robe S$ 50
2. Double robe S$ 30
3. Alms-bow S$ 10
4. An umbrella S$ 5
5. Apair of slipper S$ 5
ညောင်ကန်အေး သာသနာ့ရိပ်သာ (စင်ကာပူ)
Nyaung Kan Aye Dharma Society
Blk 209 #02-141, Yishun St 21, Singapore 760209
Email: nkasayardaw@gmail.com / ashinvisuddha@gamil.com
စာရေးသူ~~~ မင်းမြတ်ဘုန်း စာရေးချိန် 6:16 PM0ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ်
ကမ္ဘာပေါ်က အလှပဆုံး အရာတွေကို ကြည့်ချင်ရင်တော့
အလှပဆုံး နှလုံးသား နှင့် သာ ကြည့်မြင်နိုင်မည်။
အချိန်ဆိုတာ စီးဆင်းနေတဲ့ မြစ်ရေလိုပ၊ဲ တစ်ခါထိတွေလိုက်တဲ့ရေကိုနောက်တစ်ခါဘယ်တော့မှ
မကောင်းမူ့လို့ သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ အရာတွေဟာ
စွဲလန်းစရာ သိပ်ကောင်း လို့ပဲ....... ဘယ်သူမှမထိခိုက်ဘူး ဆိုရင်
တစ်ခါတရံ နည်းနည်းပါးပါး လုပ်ကြည့်ရတာ ဇိမ်ပဲ.........
မေတ္တာတရား ကလွဲပြီး ဘားမှမစွဲလမ်းတာ ပိုပြီး ဇိမ်ရှိတယ်........
လောကကြီးမှာ ဘားမှအများကြီးသိစရာမလိုဘူးဒါပေမယ့် ငါ ဘားမှမသိသေ:ဘူ ဆိုတာတော့သိသင့်တယ်
ကျွန်တော်ဟာ အနုပညာဗီဇ မပါပဲ အနုပညာကို ချစ်တဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမယ့် မင်းမြတ်ဘုန်း ဆိုတဲ့ ကျွန်တော်ဟာ ဖြစ်တည်မှူနှင့် ဖြစ်ပျက်မှူကို လက်ခံတဲ့ အညတရ တစ်ယောက်ပါ။ လွတ်လပ် ဆန်းကြယ်စွာ ဖန်းတီးခွင့်အနုပညာကို ရင်ခုန်စွာ နဲ့တက်မက်သူပါ။ ဖြစ်ချင်မှူနှင့် ဖြစ်တည်မှူ နှစ်ခု တသားတည် မကျတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော်ရဲ့ ဒီ အဆုံးမဲ့ လွမ်းချင်း ဆိုတာလေးမွေးဖွား ခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်သူကိုမှ မထိခိုက် ဘူးဆိုရင် ဒီ အဆုံးမဲ့ လွမ်းချင်း လေးဟာ ဆက်လက် ရှင်သန်နေ ဦးမှာပါ။
ကျွန်တော် ရဲ့ ချစ်စရာ မ်ိတ်ဆွေတွေပေါ့
အိပ်မက်နိဒါန်း (သုဇာဏီ)
ကောင်းထူးမောင် (Man U crazy)
Angel Glitter Graphics - MySpace Comments
ကျွန်တော့် blog ကို လာရောက်လည်ပတ်ကြတဲ့ သူများအားလုံး ကျန်းမာချမ်းသာပြီး လိုရာဆန္ဒပြည့်ဝကြပါစေ၊ ~~~~~~~မင်းမြတ်ဘုန်း